IBluestacks vs Nox App Player - The Ultimate Comparison (2020) - Ama-Softwares
IBluestacks vs Nox App Player - The Ultimate Comparison (2020)
Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi yikuphi I-Android Emulator iyona engcono kakhulu phakathi kweBluestacks neNox App Player?Hhayi-ke, sikubambile futhi wawuphendula lo mbuzo kulokhu okuthunyelwe. Siqhathanise i-Bluestacks vs Nox App Player ezizindeni ezahlukahlukene ezinjengezici, isikhombimsebenzisi-umsebenzisi, izidingo zesistimu, neminye imikhakha.
Siphinde samemezela ophumelele ekugcineni ngakho-ke lokhu kunikeza lokhu okuthunyelwe ukufundwa okugcwele ukwazi ukuthi iyiphi i-Emulator engcono kakhulu ye-Android phakathi kweBluestacks vs Nox App Player.
I-Bluestacks vs Nox App Player - Ukuqhathanisa Okuningiliziwe
Ama-Bluestacks: Ukubuka konke
IBluestacks iyi-Emulator ye-Android eyakhiwa emuva ngo-2011 ngabakwaBluestacks.Inc. Kusukela lapho, iBluestacks ibilokhu ivela emakethe yomhlaba ngenxa yokusebenza ebikuletha. IBluestacks isebenzise ubuchwepheshe bayo bokufaka i-LayerCake algorithm esebenzisa i-PC hardware ukwenza izindawo ze-Android nezinhlelo zokusebenza. Ama-Bluestacks akuvumela kalula ukuthi usebenzise indawo ye-Android kwi-PC esebenza kangcono futhi esheshayo kuneselula egqamile. IBluestacks inesisekelo somsebenzisi esingaphezu kwezigidi ezingama-210 nokubala.
I-Nox App Player: Ukubuka konke
I-Nox App Player iyi-Emulator ye-Android eyakhiwa yithimba lonjiniyela eHong Kong ngo-2015. Yize noma i-Nox App Player yethulwa ngemuva kweminyaka emine ye-Bluestacks, i-Nox Player yaphumelela ekutholeni umsebenzisi-base wezigidi eziyi-150 phesheya umhlaba. Ukusebenza okuyisisekelo kweNox App Player kwakufana neBluestacks ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Android, kepha noma kunjalo iNox App Player inezici ezithile ezahlukahlukene eziyigcina incintisana neBluestacks.
Ama-Bluestacks: Izici ezibalulekile nezinzuzo
I-Bluestack iyi-Emulator ye-Android enolwazi kakhulu futhi ethembekile isakhula futhi ifaka izici ezintsha ezingakhulisa ulwazi lwabasebenzisi. Nazi ezinye izingxenye ze-Bluestacks:
Ukwenza imephu ngokhiye: Ama-Bluestacks akuvumela ukuthi ubeke imephu okhiye bakho ngokuya ngokuncamelayo okuthandayo. Ungalungisa izibopho zokhiye ozisebenzisayo emdlalweni futhi wenze okuhamba phambili. Ubuye uthole isici sokufinyeleleka ongasidlala negundane lakho, okuyinto ebaluleke kakhulu uma udlala umdlalo we-FPS noma umdlalo wokuqala wokudubula.
Ama-Multi-Instance:Lesi sici sizokuvumela ukuthi udlale imidlalo eminingi ngasikhathi sinye ngasikhathi sinye ngokuqhekeka kwesikrini. Lesi sici sizokuvumela futhi ukuthi udlale umdlalo ofanayo kusuka kuma-akhawunti ahlukene ngewindi elilodwa.
MultiSync:Lesi isici esisanda kufakwa yi-Bluestacks. Lesi sici sizokuvumela ukuthi uvumelanise konke ukunyakaza kwakho esikrinini futhi udlale imidlalo oyithandayo.
Ama-Macros:Lesi isici esizokuvumela ukuthi uthwebule okuqoshiwe kwesikrini, wenze imali ngakho, futhi ukubuke noma kunini lapho ufuna khona. Izokuvumela futhi ukuthi uthathe izithombe-skrini bese uzigcina.
I-FPS ephezulu: Lokhu kuzokhipha ikhwalithi yevidiyo nemidlalo yesikrini sakho. Uma umdlalo usekela ama-FPS aphezulu, khona-ke ama-Bluestacks azokhiqiza isilinganiso esinjalo esizobukeka sibushelelezi futhi sijabulise amehlo.
Izici zeNox App Player nezinzuzo
Yize iNox App Player ilula ngosayizi kune-Bluestacks, isinezici ezifanayo. I-Nox App Player elula kakhulu ithatha isikhala esincane kwimemori yekhompyutha futhi ikugcinele isikhala esingeziwe. Manje ake sibone ukuthi ziyini izici zeNox App Player:
Ukwenza imephu:I-Nox App Player ikuvumela ukuthi ubophe okhiye bakho bekhibhodi nesilawuli ngokuya ngokuthanda kwakho. Ungasebenzisa ngisho igundane lakho.
Ama-Multi-Instance:Lesi sici sizokuvumela ukuthi ujabulele imidlalo eminingi ngasikhathi sinye. Ngakho-ke akukho ukuntuleka kokuzijabulisa. Kepha ngeke uthole iMulti-Instance lapha njengoba uzongena eBluestacks.
Isifundi seMacro:Lokhu kuzokuvumela ukuthi urekhode imidlalo yakho yamageyimu noma urekhode esidlangalaleni isikrini sakho futhi ikunike amandla wokuthatha izithombe-skrini zesikrini sakho futhi ungangeza nemibhalo oyisebenzisa emidlalweni yakho. Izikripthi zizokuvumela ukuthi wenze imisebenzi ethile oyingezile kwiskripthi sakho.
Ama-Bluestacks: Isixhumanisi Somsebenzisi
I-Bluestacks ine-interface-eqondile nencazelo yomsebenzisi. Konke okudingayo kutholakala ngakwesokunxele kwesikrini sakho.Ungaguqula isithonjana ukuze wazi ukuthi siyini isithonjana nokuthi senzani. Futhi uma uthanda izingqikithi ezimnyama, uzobe uthandana neBluestacks ngoba lonke uhlelo lokusebenza lwakhiwe ngezingqikithi ezimnyama kuphela. Nakhu amazwibela we-Bluestacks interface yomsebenzisi.
I-Nox App Player: Isixhumanisi Somsebenzisi
INox App Player ine-interface-interface yayo efana nethebhulethi ye-Android. Izinhlelo zokusebenza zihlelwe ezansi kwesikrini sakho, futhi izilungiselelo zeNox App Player zikhona ngakwesokunxele kwesikrini sakho. INox App Player nayo inetimu eluhlaza okwesibhakabhaka emnyama eyenza ukubukeka kukonke kukhange kakhulu.
Ukusebenza kohlelo kwehlulelwa yizilinganiso zalo zokulinganisa okusho ukuthi lolo hlelo ludla malini i-CPU ne-GPU.Kuthiwa uhlobo olusha sha lwe-Bluestacks luyi-6x ngokushesha kunangaphambilini. Yize lesi kuyisitatimende esikhulu, iBluestacks ayikaze izidedele. Senze izivivinyo ezimbalwa, futhi imiphumela esiyitholile yaba.
Sidlale i-Call of Duty: Mobile on Bluestacks amahora ambalwa futhi imiphumela esiyitholile yaba. IBluestacks ibisebenza kahle impela, futhi bekungekho ukuphahlazeka noma amaconsi e-FPS esiwabonile. Umdlalo wawusebenza kahle, futhi futhi asikaze sibone ama-Bluestacks esebenzisa i-CPU engaphansi kakhulu. Sekukonke ngokusebenza iBluestacks yenze kahle kakhulu.
I-Nox App Player: Ukusebenza
Yize iNox App Player iyi-emulator elula, abantu abaningi bayayithatha kancane. INox App Player iphinde yadlulisa ukuhlolwa kwethu kokuma ngokulinganisa ngempumelelo i-Call of Duty: Iselula neminye imidlalo ngasikhathi sinye, futhi samangazwa yimiphumela.
Sithole i-Nox App Player nayo yenze kahle ngamaconsi e-0 FPS, futhi akukho kuphahlazeka okubonile. Ngokuqhathanisa neBluestacks, iNox App Player nayo inikeze umqhudelwano wamakhanda ekusebenzeni.
Ama-Bluestacks: Imfuneko Yesistimu
Uhlobo olusha sha lwe-Bluestacks lungasebenza ku-Windows naku-Mac. Okwewindows, noma yini kusuka kuWindows naku windows yakamuva kusebenza kahle. Uma une-processor engcono kakhulu iBluestacks izosebenza njengokufana nezisekelo, ungasebenzisa noma iyiphi i-AMD neprosesa ye-Intel. Ngokwenkumbulo, kufanele okungenani ube ne-2GB RAM, futhi okungenani i-10GB yesikhala sediski samahhala nanoma yini engaphezulu kwale mikhawulo kungaholela ekusebenzeni okungcono kakhulu. IBluestacks izosebenza uma ungenayo i-GPU kodwa ube ne-GPU uma uhlela ukudlala umdlalo.
Okwe-Mac, uma une-OS Sierra nangaphezulu kwe-Bluestacks kuzosebenza kahle. Ngokuya ngamaprosesa uma une-Intel noma iyiphi iprosesa ye-dual-core Bluestacks izokusekela lokho, nenkumbulo, noma yini engaphezulu kwe-4GB RAM kanye ne-10GB space disk izosebenza.
I-Nox App Player: Imfuneko Yesistimu
INox App Player wuhlelo olulula olunqoba lesi sigaba ngoba lungasebenza kunoma yimuphi umshini owulayishe kuwo. OkweWindows, noma yini engaphezulu kweWindows XP neVista isekela iBluestancks, futhi kwimemori, idinga kuphela i-1.5GB ye-RAM ne-3 GB yesikhala sediski. Izidingo zesistimu zingaphansi kakhulu kwe-Bluestacks futhi uma ucabanga ukuthi ngabe lokhu okushiwo ngenhla kuyizisekelo zeNox App Player bese ucabanga ukuthi i-Nox App Player izosebenza kanjani uma ithola ama-specs abuyekeziwe.
INox App Player yayakhelwe kakhulu abasebenzisi beWindows futhi yakhishwa ngonyaka ngemuva kokuthi yethulwe ngamawindi. Ukuze usebenzise i-Nox App Player, kufanele ube neMac OS 10.9 noma ngaphezulu.
Isiphetho: Yikuphi Okufanele Ukhethe?
Manje ngemuva kokudlula kulokhu okuthunyelwe, sinethemba lokuthi manje usunqumile futhi uwumnqobi futhi, yilokhoAma-Bluestacks.Kepha noma kunjalo, bekunemikhakha ethile lapho i-Nox App Player ibinikeza khona umncintiswano onzima kumaBluestacks, futhi lokho bekungokusebenza nokusebenza komsebenzisi.
Yize iNox App Player yintsha, kuseluhlelo olusafufusa futhi lusakhula.Sikuthola kufaneleka ngokuphelele ukusebenzisa isizathu seBluestacks ekubeni ukuthembeka nezici zayo eziqinile. Abadlali abaningi abadumile basebenzisa ama-Bluestacks ukudlala imidlalo ye-Android kwi-PC yabo ngoba bayazi ngeBuestacks nezici zayo.
Uma unemibuzo noma iziphakamiso, sicela uzifake kusigaba sokuphawula ngezansi. Sizozama ukuphendula yonke imibuzo yakho ngokushesha okukhulu.